Amagumbi Abantwana Amangalisayo | January 2022
Iingcamango ezingama-20 eziNcomekayo zeNursery-Iigumbi zabantwana zoyilo lwabazali beChic
Kuninzi kakhulu onokukwenza nge nursery ukuyenza ibe nesitayile, kumnandi kwaye kuyasebenza. Nazi iindlela ezingama-20 ezithandekayo kwaye ziyinyani ukuhombisa igumbi lokuqala lomntwana wakho. Izimvo zoyilo kunye nemizekelo engaphambili.
Iingcamango ezingama-55 zeGumbi lokuYila lamaGumbi aBantwana- Indawo yokuhombisa yokulala yabantwana kunye nesitayile
Amagumbi abantwana apholile, wonke umntu esikolweni (kwaye mhlawumbi nabazali) uya kuba nomona.
Iibhedi ezi-16 ezipholileyo zebhedi- iiNdawo zokuYila zebhedi yeeNdawo- Iingcamango zeGumbi leBunk eliSitayile kwiiNdwendwe naBantwana
Ngelixa iibhedi zebhedi bezisoloko ziliphupha labantwana, abaqulunqi ngoku baxakeke ngamagumbi okulala. Zenziwe ngeebhedi ezakhelwe-ngaphakathi kwaye zihlala zihanjisiwe kwi-attics engathandekiyo okanye kwiindawo zeendwendwe, ezi zimvo zilishumi elinesithandathu zegumbi lokulala ziya kukukhuthaza ukuba uzame indlela yokonga indawo ekhaya.
11 Imibala yepeyinti yaBantwana egqibeleleyo- Igumbi lokulala labantwana Ipeyinti yoMthunzi
Le yimibala yepeyinti eya kukhula kunye nomntwana wakho, ukusuka kwisibini esibi ukuya kwiminyaka yokufikisa.
Iingcamango ezingama-30 zegumbi lokudlala-Iingcebiso zokuCoca igumbi lokudlala
Ukusuka ezindongeni zokukhwela ekhaya ukuya kubugcisa bobugcisa kunye nezikhululo zobugcisa, abantwana -zindawo zokurhubuluza kuphela, iindawo zokudlala, nokunye okuninzi, sibonisa imibono engama-30 yegumbi lokudlala eliza kukhupha umntwana omncinci kuye wonke umntu.
Uyenza njani iGumbi lokuDlala eliNganyangekiyo leHlabathi- Igumbi labantwana elinoDwala oluLwa
Ukunyuka kodonga, isikhululo sobugcisa, kunye nokuninzi: Kwigumbi elingaphantsi kwekhaya laseSan Francisco, uRegan Baker wenza indawo ye-adventure yamaphupha abantwana bakho. Nantsi indlela yokwenza eyakho.
Uhlaziyo olu-5 lokwenza ukuba iNursery yakho ikhuseleke- Ifenitshala ekhuselekileyo yaBantwana, Ipeyinti kunye neMveliso zokuCoca
Ifenitshala yendalo nekhuselekileyo, iimveliso zokucoca kunye nepeyinti yeentsana nabantwana ukulungiselela abantwana babo okanye igumbi labantwana ubomi obusempilweni.
i-ladybugs vs asian beetles
Imithi yekrismesi emhlophe ebhityileyo
umfanekiso wendlu kaJustin biebers